စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ငါးရောင်းသူအမျိုးသမီးကြောင့်မိဘရင်ခွင်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ ခြေရှည်တဲ့ကောင်မလေး – Amara News
ညောင်အင်းကနေ ငါးရောင်းပြီးပြန်လာတဲ့ဒေါ် …..တစ်ယောက်၊လာဂမို့တိုးဂိတ်နားက လမ်းဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ရွာလည်နေတဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်။သူ့ကို တစ်ခါမှ ဒီအရပ်မှာမမြင်ဘူး။အသက်ကလည်း မသကာရှိမှ (၁၂)နှစ်ဝန်းကျင်။ရှေ့သွားမလို နောက်ပြန်မလိုနဲ့ ချီတုံချဖြစ်နေဟန်ကြောင့် သူမအနားသွားပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။သမီး ဘယ်ကလာတာလဲ ဘုရားကြီးကတဲ့။
ဘယ်သွားမှာလဲ ဆိုတော့ ရေရေရာရာမဖြေနိုင်။ဒီတော့ သေခြာအောင်ထပ်မေးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထွက်လာတာလဲသမီး ဆိုတော့အဒေါ်ဆူလို့တဲ့။ခက်ပြီ ။ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့။ဒေါ် ……… စဉ်းစားတယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး အတိုင်းလွှတ်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီကလေးမလေးအတွက် အန္တရာယ်ကလက်တစ်ကမ်းမှာ။အချိန်ကလည်း ညမိုးချုပ်စ။နေရာကလည်း မြို့အထွက်နား။လူကလည်းပြတ်။ကဲ, မထူးတော့ပါဘူး၊ အဒေါ့်အိမ်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီး ဒေါ် ……… က လယ်ထဲကသူ့အိမ်ဆီ သူမကိုခေိါသွားပါတော့တယ်။
ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲစခန်းက ရဲအုပ်တင်ဌေးနဲ့နယ်ထိန်းအဖွဲ့၊CCTV မှတ်တမ်းတွေပြန်ကြည့်ပြီး အလုပ်ရှုပ်နေကြပြီ။ဘုရားကြီးမြို့၊(၂)ရပ်ကွက်၊ဘူတာလမ်းက အသက်(၁၂)အရွယ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦး နေအိမ်ကနေဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိတဲ့ကိစ္စ။ဟော, CCTV မှတ်တမ်းမှာ သူမကိုတွေ့ပါပြီ။အချိန်က ညနေ၅နာရီ၊၄၅မိနစ်မှာ ဘုရားကြီး DANKO ဆီဆိုင်မှာ ဆီဝင်ဖြည့်နေတဲ့ အဲ့ကောင်မလေး။နောက် အဲ့ဆီဆိုင်ကနေ ပဲခူးဘက်မောင်းထွက်သွားပြီ။
နောက်တော့ …. နောက်တော့ ။ဒေါ် ……… ဆီမှာ ဖုန်းမရှိ။ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းတာက ကကောင်မလေးက သူ့အမေဖုန်းနံပါတ်မှတ်မိပေလို့။ဒီတော့ ရွာထဲကဖုန်းရှိသူတစ်ဦးထံအကူအညီတောင်းပြီး ကောင်မလေးနဲ့သူ့မိဘတွေကို ဖုန်းချင်းချိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဒီနေ့ ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲစခန်းကနယ်ထိန်းအဖွဲ့နဲ့သူ့မိဘတွေချိန်းဆိုထားတဲ့ ပဲခူးလာဂမို့တိုးဂိတ်နားမှာ ဆုံကြပြီ။သေကံမရောက်၊သက်မပျောက်ခဲ့တဲ့သမီးလေး(သို့မဟုတ်)ထစ်ကနဲရှိ ဟိုသွားမယ် ဒီသွားမယ်လုပ်တက်ကြတဲ့ ခုခေတ် ခြေရှည်တက်ကြတဲ့စရိုက်ရှိသူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေထဲက သမီးလေး။
ဘာပစ္စည်းမှလည်း အပျောက်အရှမရှိဘဲ အကောင်းပကတိပြန်တွေ့ရတဲ့သမီးလေး။ဆင်းရဲပေမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ ငါးရောင်သည်လင်မယားနှစ်ဦးရဲ့စောင့်ရှောက်မှုအရိပ်အောက်မှာ အေးချမ်းစွာနဲ့ တစ်ညတာခိုနားခွင့်ရခဲ့ပြီး ………အခုတော့ အဲ့ဒီခြေရှည်တဲ့ကောင်မလေးဟာ သူ့မိဘတွေရဲ့ရင်ခွင်ထဲကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါပြီ။အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်ကလေးများ ၊ တိမ်ညိုတိမ်မဲအန္တရာယ်တွေကနေလွတ်ကင်းပြီး ကောင်းစွာ ထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်ကြပါစေ။
ဧရာ(ပဲခူး၊သိလိုတာဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားကြီးနယ်မြေရဲစခန်းမှုးအား အထူးကျေးဇူတင်ရှိပါတယ်။ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံကို ကိုအောင်ခန့်ပို့စ်ကယူသုံးပါတယ်။
ညောငျအငျးကနေ ငါးရောငျးပွီးပွနျလာတဲ့ဒျေါ …..တဈယောကျ၊လာဂမို့တိုးဂိတျနားက လမျးဘေးမှာ ဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ရှာလညျနတေဲ့ကလေးမလေးတဈယောကျကိုတှပေ့ါတယျ။သူ့ကို တဈခါမှ ဒီအရပျမှာမမွငျဘူး။အသကျကလညျး မသကာရှိမှ (၁၂)နှဈဝနျးကငျြ။ရှသှေ့ားမလို နောကျပွနျမလိုနဲ့ ခြီတုံခဖြွဈနဟေနျကွောငျ့ သူမအနားသှားပွီးမေးလိုကျပါတယျ။သမီး ဘယျကလာတာလဲ ဘုရားကွီးကတဲ့။
ဘယျသှားမှာလဲ ဆိုတော့ ရရေရောရာမဖွနေိုငျ။ဒီတော့ သခွောအောငျထပျမေးလိုကျတယျဘာဖွဈလို့ထှကျလာတာလဲသမီး ဆိုတော့အဒျေါဆူလို့တဲ့။ခကျပွီ ။ခုခတျေကလေးတှကေတော့။ဒျေါ ……… စဉျးစားတယျ။ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူးဆိုပွီး အတိုငျးလှတျပေးလိုကျရငျတော့ဒီကလေးမလေးအတှကျ အန်တရာယျကလကျတဈကမျးမှာ။အခြိနျကလညျး ညမိုးခြုပျစ။နရောကလညျး မွို့အထှကျနား။လူကလညျးပွတျ။ကဲ, မထူးတော့ပါဘူး၊ အဒျေါ့အိမျလိုကျခဲ့ဆိုပွီး ဒျေါ ……… က လယျထဲကသူ့အိမျဆီ သူမကိုခေိါသှားပါတော့တယျ။
ဘုရားကွီးနယျမွရေဲစခနျးက ရဲအုပျတငျဌေးနဲ့နယျထိနျးအဖှဲ့၊CCTV မှတျတမျးတှပွေနျကွညျ့ပွီး အလုပျရှုပျနကွေပွီ။ဘုရားကွီးမွို့၊(၂)ရပျကှကျ၊ဘူတာလမျးက အသကျ(၁၂)အရှယျကြောငျးသူလေးတဈဦး နအေိမျကနဆေိုငျကယျတဈစီးနဲ့ဘယျပြောကျသှားမှနျးမသိတဲ့ကိစ်စ။ဟော, CCTV မှတျတမျးမှာ သူမကိုတှပေ့ါပွီ။အခြိနျက ညနေ၅နာရီ၊၄၅မိနဈမှာ ဘုရားကွီး DANKO ဆီဆိုငျမှာ ဆီဝငျဖွညျ့နတေဲ့ အဲ့ကောငျမလေး။နောကျ အဲ့ဆီဆိုငျကနေ ပဲခူးဘကျမောငျးထှကျသှားပွီ။
နောကျတော့ …. နောကျတော့ ။ဒျေါ ……… ဆီမှာ ဖုနျးမရှိ။ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးတာက ကကောငျမလေးက သူ့အမဖေုနျးနံပါတျမှတျမိပလေို့။ဒီတော့ ရှာထဲကဖုနျးရှိသူတဈဦးထံအကူအညီတောငျးပွီး ကောငျမလေးနဲ့သူ့မိဘတှကေို ဖုနျးခငျြးခြိတျပေးလိုကျတယျ။ဒီနေ့ ဘုရားကွီးနယျမွရေဲစခနျးကနယျထိနျးအဖှဲ့နဲ့သူ့မိဘတှခြေိနျးဆိုထားတဲ့ ပဲခူးလာဂမို့တိုးဂိတျနားမှာ ဆုံကွပွီ။သကေံမရောကျ၊သကျမပြောကျခဲ့တဲ့သမီးလေး(သို့မဟုတျ)ထဈကနဲရှိ ဟိုသှားမယျ ဒီသှားမယျလုပျတကျကွတဲ့ ခုခတျေ ခွရှေညျတကျကွတဲ့စရိုကျရှိသူ ဆယျကြျောသကျအရှယျတှထေဲက သမီးလေး။
ဘာပစ်စညျးမှလညျး အပြောကျအရှမရှိဘဲ အကောငျးပကတိပွနျတှရေ့တဲ့သမီးလေး။ဆငျးရဲပမေယျ့ စိတျရငျးကောငျးတဲ့ ငါးရောငျသညျလငျမယားနှဈဦးရဲ့စောငျ့ရှောကျမှုအရိပျအောကျမှာ အေးခမျြးစှာနဲ့ တဈညတာခိုနားခှငျ့ရခဲ့ပွီး ………အခုတော့ အဲ့ဒီခွရှေညျတဲ့ကောငျမလေးဟာ သူ့မိဘတှရေဲ့ရငျခှငျထဲကောငျးမှနျစှာ ပွနျလညျရောကျရှိသှားပါပွီ။အနာဂတျကွယျပှငျ့ကလေးမြား ၊ တိမျညိုတိမျမဲအန်တရာယျတှကေနလှေတျကငျးပွီး ကောငျးစှာ ထှနျးလငျးတောကျပနိုငျကွပါစေ။
ဧရာ(ပဲခူး၊သိလိုတာဖွကွေားပေးခဲ့တဲ့ ဘုရားကွီးနယျမွရေဲစခနျးမှုးအား အထူးကြေးဇူတငျရှိပါတယျ။ဓါတျပုံ(၂)ပုံကို ကိုအောငျခနျ့ပို့ဈကယူသုံးပါတယျ။
Previous Article တနင်္သာရီမြို့နယ် အမှတ်၉ကျေးရွာအနီး ရှားပါးတောတွင်းတိရိစ္ဆာန် “ကြံ့သူတော်” တစ်ကောင် လက်ကြိုးတန်းလန်းဖြင့် တွေ့ရှိ
Next Article အမြဲတမ်း ကိုယ့်နေရာကနေဘဲ မကြည့်ဘဲ တခြားသူ ဘက်ကနေလဲ ကြည့်ပေးပါ